Iran oo codsatay in loo soo xiro madaxweyne Donald Trump - Calanka.com
Xukuumadda Iran ayaa soo saartay warqad ay ku weydiisanayso booliska adduunka ee loo yaqaan Interpol in ay gacan ka siiyaan sidii ay usoo qaban lahaayeen islamarkaana ay usoo xiri lahaayeen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, iyo tobaneeyo kale oo ay aaminsanyihiin in ay ka dambeeyeen dilkii magaalada Baqdad horraantii sannadkan loogu geystay Jeneraal Qaasim Suleymani.
Janaraal Qaasim Suleymaan, oo ahaa madaxa cutub kamid ah ciidamada ilaalada kacaanka ee dalka Iran oo lagu magacaabo Quds ayaa horaantii bishii janaayo ee sanadkan lagu dilay gantaallo ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku rideen garoonka diyaaradaha magaalada Baghdad ee dalka Ciraaq xilli uu garoonkaasi si qarsoodi ah uga soo dagay.
Dacwad oogaha guud ee Tehran Cali Alqasimehr ayaa Isniintii sheegay in Trump iyo 30 qof oo kale oo ku lug lahaa dilkii Qaasim Sulaymaani ay wajihi doonaan “dacwado la xiriira dil iyo argagixiso” sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay wakaaladda wararka Iran ee ISNA.
Cali Alqasimehr kuma uusan magacaabin qoraalkiisa magcaha xubnaha kale ee ay la doonayaan in lala soo xiro Trump.
Hay adda booliska adduunka oo xaruntoodu ku taal magaalada Lyon, ee dalka Fransiiska ayaanan wali ka hadlin codsiga Iran kasoo gaaray.